गठबन्धन : राजनीति कि रणनीति ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार गठबन्धन : राजनीति कि रणनीति ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणको मतदान २१ गते सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना सुरु हुनेछ । स्मरण रहोस् देश चुनावी महासंग्राममा होमिनुको प्रधान उद्देश्य संविधान २०७२ को कार्यान्वयन नै हो । प्रदेशको निर्वाचनसँगै देशमा संघीयता कार्यान्वयन हुनेछ ।
संघीय शासनप्रणाली मुलुकको नयाँ व्यवस्था हो । प्रदेशका फरक—फरक अवस्था, समस्या, प्राथमिकता एवं यथार्थ भएका कारण दलहरूले राष्ट्रिय स्तरमा जारी घोषणापत्रले नपुग्ने हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत घनघोर अन्तर हुने हुँदा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हो । यतातर्फ ध्यान दिनबाट किन चुक्न पुगे दलहरू ?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन निर्माण गरी एउटै साझा घोषणापत्रसमेत जारी गर्न सफल भए । त्यतिमात्रै होइन दुवै चरणका चुनावपश्चात पार्टी एकीकरण गरी एउटै (कथित) कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण र चुनावी तालमेल समेत बनेको छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लगायत दल मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइएको छ । यसरी देशका प्रमुख दलले राजनीतिक धु्रवीकरण निर्माण गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तरंग सिर्जना भएको छ । नेपाली राजनीतिमा विभिन्न सवालहरू अगाडि आएका छन् । स्थायित्वको निम्ति भनिएका यस्तो गठबन्धनले जनताका प्रश्न र आशंकाको निवारण गर्नुपर्छ ।
एकताको सूत्र सत्ता ?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा समानता छन् र विचार र सिद्धान्तको मेल पनि नभएका होइनन् । तथापि कतिपय सैद्धान्तिक दृष्टिकोण बुझाइ, स्कुलिङ, गन्तव्य र व्यवहारमा ठूलो मतान्तर छ । नेपाली समाजको संघर्ष, क्रान्ति, रूपान्तरणको अभियान, मूल समस्याका बारेमा दुवै पार्टीका दस्ताबेज बाझिन्छ । एक र अर्को पार्टीको गन्तव्यसमेत फरक देखिने अवस्थामा दुवै पार्टीबीचको मिलन विन्दु केवल सत्ता सम्हाल्ने सत्ताकेन्द्रित एकता हो भने त ठीकै छ, अन्यथा विचारको भिन्नतालाई एकरूपता दिन, बहस गर्न सहमति खोज्न जरुरी छैन र ? राजनीति आदर्श, नैतिकता, विश्वास, पारदर्शी, अग्रगमन, समानता, सभ्यताका निम्ति जरुरी हुन्छ ।
सरकार गठन, विघटन, सत्तास्वार्थ, पदको लोभ, जाति र नश्लवादको निरन्तरता, सम्पत्तिको संरक्षण, विलासिताको निम्ति दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन ।
नेपाली कथित कम्युनिस्ट पार्टीले सडक, सदन र सरकारमा रहेर जनाधिकारका निम्ति संघर्ष गर्ने भन्दै दशकौंदेखि झुठ बोल्दै आइरहेका छन् । सदन र सरकारका रहँदा जनताका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भलो हुने काम गर्न सकेनन् । जनजीविका, भूमिअधिकार, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति समुदाय र लिंगको हितमा काम गर्न सकेनन् । त्यतिमात्रै होइन व्यक्तिगत सम्पत्ति, पद, लोभ, कमिसन, जातिवाद, नातावादमा रमाउन पुगे । अकूत सम्पत्ति कमाउन सत्ताको दुरुपयोग भए ।
हाल अर्को भूmठ बोल्दैछन् । गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरे स्थायी सरकार बन्छ स्थायित्व प्राप्त हुन्छ ? स्थायित्व प्राप्त गर्ने आधार के के हुन् ? समानता र समानुपातिक समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय, विभेदहरूबाट मुक्ति कसरी हुन्छ ? समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने ? उदारीकरणको नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण, व्यवसायीकरण र विकृति कसरी रोक्ने ? राजनीतिक भ्रष्टाचार, जातिवाद, नातावाद, विचौलिया, गुण्डाराजको अन्त्य गर्ने ठोस कार्यक्रम के छ ? त्यति सजिलो छैन, समृद्धि । अझ त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न, वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गरे पनि त्यहाँ धोकाधडी नहुने, सरकार विघटन र निर्माणको खेल नहुने, देशीविदेशी शक्तिको षडयन्त्रमा नलाग्ने आधार के छ ?
नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको ठेक्का आपूmले लिएको ठान्दछ । गुण्डाराज, भ्रष्टाचार, अनियमितता, छिमेकी मुलुक भारतपरस्त पैसा र दम्भको भरमा चुनाव जित्ने जस्ता आरोप छ, कांग्रेसमाथि । एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न, हामी कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्टमाथि विभिन्न प्रश्न गर्ने गर्छौं । लोकतन्त्रवादी पार्टी भनेको कस्तो हो ? व्यक्ति लोकतन्त्रवादी हुन के गर्नुपर्छ ? को हो लोकतन्त्रवादी ? कोही व्यक्ति लोकतन्त्रवादी या लोकतान्त्रिक छ या छैन, अथवा हो कि होइन भनी कसरी छुट्टयाउने ? कांग्रेस पार्टीको सदस्यता लिनु मात्रै लोकतन्त्रवादी हुनु हो ? त्यसो हो भने लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने देशको कुनै पनि व्यक्ति कांग्रेस पार्टीमा किन अटाउन सकेनन् ?
जनताको त्याग बलिदानी, सहादत, आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षद्वारा स्थापित जनउपलब्धि कार्यान्वयन गर्न स्थायी सरकार चाहिन्छ । संविधानको कार्यान्वयन, आन्दोलित र असन्तुष्ट पक्षको जायज माग सम्बोधन गर्न समयानुकूल संविधानको संशोधनको निमित्त एउटा गठबन्धनले स्प्ष्ट बहुमत प्राप्त गर्न जरुरी छ । तथापि वाम गठबन्धन रहने या नरहने, चुनावपश्चात घोषित दुई पार्टी एकता सम्भव छ या छैन भन्ने सवाल चुनावको परिणामपश्चात निश्चय हुनेछ ।
एक पार्टीले अर्को पार्टीका कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई कति स्वीकारेका हुन्, हेर्न बाँकी छ । बहुमत प्राप्त गरे सरकार सञ्चालन गर्ने र नआए सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेस निकै विचलित बन्न पुगेको भए पनि ठूलो पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना छँदैछ । जुनसुकै गठबन्धनले बहुमत ल्याए पनि अब राष्ट्रको दिगो विकास, स्थायी शान्ति, स्थायित्व, समृद्धि र जनाधिकार स्थापित गर्ने दिशातर्फ कटिबद्ध भएर अघि बढ्न जरुरी छ । मानवता, सभ्यता, शिक्षित, उद्यमशील, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने सत्तास्वार्थलाई गौण मान्नुपर्छ ।
हामी लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्याय, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण संविधानवादलगायतका महत्वपूर्ण जनउपलब्धि कार्यान्वयनको चरणमा छौं । वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको औचित्य के ?
विचार, सिद्धान्त र वादलाई मुख्य आधार, राष्ट्र निर्माणको स्पष्ट धारणासहित पार्टी एकता अथवा गठबन्धन निर्माण गर्नसके सफलता मिल्ला । राष्ट्रको आवश्यकता सरकरको उपस्थिति हिनताको अन्त्य गर्नु हो । सरकार छ र नागरिकको सुरक्षा, कानुनको कार्यान्वयन, अमनचयन, शान्ति र नागरिक हक उपलब्ध गराउने दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ । जनता त्रास, डर, भय, शोषण, दमन उत्पीडनमा जिउन बाध्य पारिएका छन् । समयमा नै राज्यको उपस्थिति देखाउन जरुरी छ, अन्यथा जनताको राज्य र सरकारप्रति विश्वास भंग हुनेछ ।
संक्रमणकालको अन्त्य, हिंसाको दलदलबाट मुक्ति, दण्डहिनताको अन्त्य, नागरिक सुरक्षा, मानवाधिकारको पालना, सबै प्रकारको शोषण, उत्पीडनबाट मुक्ति, समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता मुद्दामा दलहरूको बीचमा साझा सहमति खोज्न जरुरी छ ।
राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्व कर्मचारी, प्रशासनको नेतृत्व, सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षा अंग, सरकारी गैरसकारी निकाय पद, अंग, आयोग, नियोग न्यायालय जस्तो राष्ट्रकै प्रमुख जिम्मेवारी एवं क्षेत्र र पदहरूमा एकल खस आर्य नेतृत्व द्वन्द्व र घृणाको प्रमुख कारण हुन् । यस्तो अवस्थामा स्थायी शान्ति, स्थायित्व, समृद्धि र समान न्याय असम्भव छ ।
समानुपातिक समावेशीकरण तथा प्रमुख राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा महिला, दलित, उत्पीडित वर्ग, सीमान्तकृत जनजाति, कमजोर खस आर्य, पिछडिएको क्षेत्रको सहभागिता जरुरी छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारमा सबै वर्ग, समुदाय, जातजाति, लिंग, क्षेत्र समुदायको सामूहिक निर्णय गर्न जरुरी छ ।
राजनीति आदर्श, नैतिकता, विश्वास, पारदर्शी, अग्रगमन, समानता, सभ्यताका निम्ति जरुरी हुन्छ । सरकार गठन, विघटन, सत्तास्वार्थ, पदको लोभ, जाति र नश्लवादको निरन्तरता, सम्पत्तिको संरक्षण, विलासिताको निम्ति दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन । साझा धारणा, दृष्टिकोण योजना निर्माण गर्न सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ । त्यस्तो दृढ नेतृत्व भए मात्रै पाँचवर्षे स्थायी सरकार निर्माण गर्न सम्भव छ ।
‘हिंसा फलाउनेमाथि कडा कारबाही’